Nepal Dayari | हार्दिक बधाई ,चर्चित हास्यकलाकार भारती सिंह र हर्षले पहिलो सन्तानलाई गरे स्वागत !
हार्दिक बधाई ,चर्चित हास्यकलाकार भारती सिंह र हर्षले पहिलो सन्तानलाई गरे स्वागत !
चैत्र २१, २०७८ सोमबार ३४६ पटक हेरिएको
हास्य कलाकार भारती सिंह र उनका श्रीमान् हर्ष लिम्बाचिया छोराको आमाबुवा बनेका छन् । दम्पतीले केही महिना अगाडि नै आफ्नो गर्भावस्थालाई मिठो ढंगले घोषणा गरेका थिए र अब, उनीहरूले आफ्नो परिवारमा सबैभन्दा प्यारो सानो आ`त्मालाई स्वागत गरेका छन् । हर्षले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा सेयर गरे कि उनीहरूले बच्चाको आशीर्वाद पाएका छन् ।
उनले भारतीसँग एउटा तस्बिर साझा गरे जसमा उनीहरू सेतो पोशाकमा जुम्ल्याहा देख्न सकिन्छ । नयाँ अभिभावकहरू फूलको टोकरी हेर्दै र स्न्यापको माथि, “`tsaboy´ लेखिएको देख्न सकिन्छ । कमेन्ट सेक्सनमा अर्जुन बिजलानी, नेहा कक्कड, राहुल वैद्य, अश्नूर कौर, मौनी रोय र टेलिविश्वका धेरैले मन पराउनेहरूले जोडीलाई शुभकामना दिएका छन् र हार्ट इमोजीहरू छोडेका छन् ।
केही दिनअघि इन्टरनेटमा भारती र हर्षले आफ्नो पहिलो सन्तानलाई स्वागत गरेको र यो छोरी हो भन्ने खबरहरु बाहिर आएका थिए । कमेडियनले अफवाहको खण्डन गर्दै आफू अझै सुटिङमा रहेको बताइन् । `मलाई प्रियजनहरूबाट बधाई दिने सन्देशहरू र कलहरू आइरहेका छन्। मैले छोरीलाई स्वागत गरेको खबर छ । तर यो सत्य होइन। म खत्रखत्रको सेटमा छु ।
त्यहाँ १५ /२० मिनेटको लागि ब्रेक थियो। त्यसैले म। लाइभ आउने र म अझै काम गरिरहेको छु भनेर स्पष्ट पार्ने निर्णय गरें।” उनले आफ्नो इन्स्टाफममा आफ्नो म्याद नजिकिदै गर्दा आफू ड-राएको बताएकी थिइन्। अस्पष्टका लागि, भारती र हर्षले डिसेम्बर ०३ /२०१७ मा विवाह गरे र ४ वर्षको वैवाहिक आनन्द पछि, उनीहरूले अभिभावकत्वलाई अँगालेका छन्।